Nevion သည် JPEG XS video compression ကို Virtuoso media node သို့ထပ်ထည့်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Nevion virtuoso မီဒီယာ node ကိုမှ JPEG, XS ဗွီဒီယိုချုံ့ဖြည့်စွက်
Nevion virtuoso မီဒီယာ node ကိုမှ JPEG, XS ဗွီဒီယိုချုံ့ဖြည့်စွက်
Nevionvirtualized မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏, ဆုရ provider က, ကသူ့ရဲ့ flagship software ကို-သတ်မှတ်ထားသောမီဒီယာ node ကိုအသစ် JPEG, XS encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါမီဒီယာ function ကိုထည့်သွင်းတော်မူကြောင်းကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Nevion virtuoso။ အသစ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြီးသားရှင်းပြီထွက်လျက်ရှိသည်ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်ကွန်ရက်တစ်ခုအားဖြင့်အကြောင်းအရာအချက်အချာ၏အတွင်းနှင့်ထုတ်သောဗီဒီယိုအရ, တစ်ဦးကိုဗဟိုမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အဦများဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် - နည်းပညာ၏ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအရာရှိတဦးကဖြန့်ကျက်။
JPEG, XS encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါမီဒီယာ function ကို
JPEG, XS (ISO / IEC 21122) (နှစ်ဦးစလုံးတစျခုအချိန်နှင့်မျိုးစုံ concatenated ချုံ့များအတွက်) ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့အမြင်အာရုံ Lossless output ကိုရရှိစေသည်ဗီဒီယိုသစ်တစ်ခု encoding ကစံ, Sub-မီလီစက္ကန့အောင်းနေချိန်မှာ, ဗွီဒီယိုတစ်ခုဘောင်တစ်ခုအစိတ်အပိုင်း ie ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်. 10 နှင့်ကျော်လွန်ပြီး: အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ compression 1 အထိအချိုးနှင့်အတူအောင်မြင်မှု။ ဤသည်၏အနိမ့်အောင်းနေချိန် Real-time သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် JPEG, XS အလွန်ဆွဲဆောင်မှုစေသည် HD ကျယ်ပြန့်-ဧရိယာကွန်ရက်များ (WANs) ကျော်နှင့် 4K / UHD ဗီဒီယိုက။ compressed လုပ်မထားတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလားအလာ option ကိုမရသည့်အခါလည်း bandwidth ကို-သတ်ကျောင်းဝင်းနှင့်စက်ရုံ local area network (LANs) အတွက်ကသင့်လျော်မှန်ကန်စေသည်။
အဆိုပါ Nevion virtuoso JPEG, XS မီဒီယာ function ကို စွမ်းအားဖြင့်နေသည် TICO-XS မှ intoPIX နှင့် encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါစွမ်းရည်နှစ်မျိုးလုံးကမ်းလှမ်းခြင်း, Multi-ရုပ်သံလိုင်းထောက်ခံမှု။ ဒါဟာ (SDI နှင့် IP ဖြစ်စေများတွင် compressed လုပ်မထားတဲ့ဗွီဒီယိုကိုယူSMPTE ST 2110-20) ကို formats နှင့် IP ကိုကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် JPEG, XS encoded ဗီဒီယိုက Output ဖြစ်ပါတယ် (SMPTE ST 2110-22) ။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းသုံးပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး SMPTE 2022-7 အခြေစိုက် SIPS (ချောမွေ့စွာ IP ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Switching) ။
အဆိုပါ JPEG, XS မီဒီယာ function ကိုလည်းသီးခြားအဖြစ်ပို့ဆောင်ခံရဖို့ကုဒ်သွင်းဗွီဒီယိုနဲ့အသံကို enable လုပ်ဖို့ဥပမာအားဖြင့် virtuoso ရဲ့ကျယ်ပြန့်အသံစွမ်းရည်နဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ် SMPTE ST 2110 စီးဆင်းလျက်, လက်ခံရရှိအဆုံးမှာညှိရလိမ့်မည်။
"ကျနော်တို့ကသည် dynamically အပေါ် configured နိုင်ပါတယ်သောများစွာသောမီဒီယာလုပ်ငန်းဆောင်တာမှ JPEG, XS ကဆက်ပြောသည်ရှိသည်ဟုရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် Nevion virtuoso "ဂျော်နီ Dolvik, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအရာရှိမှာပြောပါတယ် Nevion။ "ကျနော်တို့ကိုလည်းပြီးသားချထားလျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုအလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်။ JPEG, XS ချုံ့အချိုးအစားနှင့်အောင်းနေချိန်အကြားတစ်ဦးခြွင်းချက်ချိန်ခွင်လျှာကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်ကျနော်တို့ကဒီအများအပြားထားရှိ၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်မျှသံသယရှိသည်။ "
အဖြစ် JPEG, XS, Nevion virtuoso ပြီးသား JPEG, 2000, TICO နှင့် H.264 encoding ကစွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။
Nevion virtuoso နှင့်အသစ်သော JPEG, XS မီဒီယာ function ကိုအပေါ်ပြပွဲအပေါ်ဖွစျလိမျ့မညျ IBC 2019, 13-17 စက်တင်ဘာလ, အမ်စတာဒမ် (နယ်သာလန်) မှာ Nevion ရဲ့တဲ.
5G-Virtuosa စီမံကိန်းသည်ကန ဦး နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံသောစတူဒီယိုတည်ဆောက်မှုကိုပြီးစီးခဲ့သည် - ဇွန်လ 16, 2020
ATEME သည် SES နှင့်ပူးပေါင်းပြီး VVC ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် U-HD ထုတ်လွှင့်မှုပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည် - ဇွန်လ 9, 2020
အသံလွှင့်သူများက 5G ကိုအကောင်းမြင်ကြသည် - ဇွန်လ 9, 2020
အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor JPEG, XS Nevion SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtuoso 2019-08-14
ယခင်: ဗီဒီယိုကို & ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်မှု International
နောက်တစ်ခု: Facilis Next ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hub Shared သိုလှောင်မှုစနစ် IBC2019 မှာဥရောပပွဲဦးထွက်စေသည်